Maalinta: Noofambar 15, 2018
Xiriirka Turkiga uu la leeyahay Iran, oo ah dalka ay maamulka mareykanka cunaqabateyn adag saareen, waa in ugu yaraan ay saameyn ku yeeshaan go'aanadan. [More ...]
Ruushku wuxuu ka mid yahay waddammada uu waddankeenna ku leeyahay muhiimadda ugu sarreysa howlaha gaadiidka caalamiga ah. Ruushka wuxuu ka dhoofiyaa dalkeena kooxda soosaarka oo leh boqolaal nooc, gaar ahaan khudaarta cagaaran iyo miraha, [More ...]
Gaadiidka caalamiga ahi waa mid ka mid ah shuruudaha lama huraanka u ah dhoofinta iyo soo dejinta. Qeybta gaadiidka, oo lagu horumariyo meelaha sida dhulka, gaadiidka badda iyo hawada, ayaa ah kuwa ugu muhiimsan [More ...]
Xaqiiqda ah in dalkeenu uu ku bixiyay kor u qaad iyo horumar dhinacyo badan sanadihii ugu dambeeyay ayaa soo jiidatay indhaha wadamada adduunka. Iyadoo la raacayo, Turkey, taas oo uu leeyahay noqon jiidashada weyn, gaar ahaan dhoofinta in la sameeyo [More ...]
Shirkadaha Adanali Sahayda Gaadiidka Gaadiidka
Maalmahan, qaybo badan ayaa ka jira silsilado ballaadhan si loo suurtogeliyo dhammaan noocyada codsiyada, codsiyada iyo raadinta in laga gaadho internetka. Dabcan, qaybta saadka ayaa sidoo kale ka socota keegaan [More ...]
Çerkezköy-Halkalı Mashruuca Jid-gaabinta iyo Mashruuca Isgaarsiinta
Çerkezköy-Halkalı Mashruuca Saxiixa Wadada iyo Isgaarsiinta ee Qeybta Natiijada Tijaabada Qaanuunka 2018 / 481585 GCC ayaa xaddidaya qiimaha 24.308.165,32 TL ee Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka (TCDD) iyo ugu dhowaan. [More ...]
Imtixaannada Aqoonsiga Gawaarida, oo xiriir dhow la leh saraakiisha shirkadda iyo shaqaalaha ku hawlan ka ganacsiga ganacsiga gawaarida la adeegsaday, ayaa la qaban doonaa Noofembar 28 codsiyada waxaa la qaban doonaa Noofembar 29. [More ...]
Khadka Metro Understanding 1 ee Europe, 3 on Earth. Waxa uu ahaa!
Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee fadhigiisu yahay Brussels (UITP), oo ah hay'adda aan dawliga ahayn ee adduunka ugu weyn ee qaybta gaadiidka dadweynaha, waxay bixisaa qadka rakaabka ee hal mar oo leh awoodo ka badan hal xero rakaab ah oo ah 500 adduunka oo dhan. [More ...]
Raac mowqifka ugu dhow ee kuxigeenka ku xigeenka Bursa
Aragtida dadweynaha waxaa loo tixgaliyey inuu yahay tareen xawaare sare leh, laakiin mashruucu sidoo kale waxaa ku jira tareenka xamuulka qaada. Xaqiiqdii, tareenka xamuulka qaada ee qaadi doona wax soo saarka warshadaha ee Anatolia illaa dekedaha ayaa ka muhiimsan. Wuxuu dhib ku qabay ilaa uu mashruucu billowday. Ugu dambeyntii Dhaqaale [More ...]
2. Gaadiidka Gaadiidka Wareega Ururrada Sare
2 waxaa soo qabanqaabiyay Naadiga Injineerinka Gaadiidka ee Jaamacadda Yalova. Aqoon isweydaarsiga Maalmaha Gaadiidka ayaa isu keenay wakiillo waaxeed. Waxaa soo abaabulay Naadiga Injineerinka Gaadiidka oo ay gacanta ku hayaan qeybta injineerinka Gaadiidka ee Jaamacadda Yalova. Maalmaha Gaadiidka [More ...]
Degmadda Güroymak ee Bitlis, nin shaqaale ah oo loo yaqaan '21-sano jir' ayaa naftiisa lumiyay intii lagu guda jiray dayactirka iyo hagaajinta tunelada barafka ee tareenka. Qof shaqaale ah oo tareenka ka raacay degmada Güroymak ee Bitlis ayaa naftiisa dilay ka dib markii uu ku dhacay tareen xamuul. [More ...]
Tareenka Dursunbey OSB
Ujeedada Dursunbey'in waxay wax ka bedeli doontaa shaqadii ka bilaabatay Aagga Wershadaha Aasaasiga ah. OSB waa markii ugu horeysay ee mustaqbalka iyo sidoo 8 hatlık waxbarashada qabto xarun logistics tareenka ee Turkey ayaa lagu soo gabagabeeyey. 2015 [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta iyo Tareenka Waddada waa inuu ahaadaa Agenda of Sivas
Murashaxa u tartamaya Duqa AK Party Sivas Mustafa Coskun ayaa la wadaagay aragtidiisa mashruuca xallin doona dhibaatada gaadiidka magaalada. Musharraxa Musharraxa ee AK Party Mustafa Coşkun Sivas Dowladda Hoose “Nidaamka Tareenka iyo [More ...]